रणवीर र दीपिकाको बिहे १९ नोभेम्बरमा ! – MEDIA DARPAN
रणवीर र दीपिकाको बिहे १९ नोभेम्बरमा !
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १३:५७
बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको बिहेको मिति लगभग निश्चित भएको छ । दैनिक भाष्करका अनुसार यसै वर्षको १९ नोभेम्बरमा मुम्बईमा बिहे हुने भएको हो ।
ज्योतिषिलाई हेराएर दीपिकाको परिवारले यो मिति तय गरिएको बताइएको छ । उनीहरुले एक साउथ इन्डियन ज्योतिषिलाई ग्रह नक्षेत्र हेराएका थिए । निर्धारित तिथिको बारेमा रणवीरको परिवारलाई पनि जानकारी गराइएको छ । उनीहरु पनि यसमा सहमत भएका छन् ।
एप्पलले जित्यो सामसुङ विरुद्धको मुद्दा
घ्युकुमारीको फेस प्याक